တောင်သမန်သားလေး: October 2014
ဖုန်းRAM လေးနေတာတွေရှင်းလေးပေးပြီး ဖုန်းကိုပေါ့ပါးစေတဲ့ Smart RAM Booster Pro v3.97 Apk
ဖုန်းRAM လေးနေတာတွေရှင်းလေးပေးပြီး ဖုန်းကိုပေါ့ပါးစေတဲ့ Smart RAM Booster Pro လေး ဗားရှင်းအသစ်လေး ထွက်လာလို့ ဖုန်းသုံးသူတိုင် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Smart RAM Booster Pro လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုapk ( new -ver )
( MPT,MECtel,Ooredoo,Telenor )
မူလပိုင်ရှင်ကတော့ မောင်ညီဇော်( ကျောက်ဆည် )ဖြစ်ပါတယ်။
CREDIT ပေးပါတယ် ကိုညီဇော်ရေ။
မှတ်ချက် မူလ old verကိုဖျက်ရပါမည်။
ဒီapkလေးကတော့သရဲစာအုပ်တွေပေါင်းချုပ်ပြီး
တခုတော့ သတိပေးမယ်နော်-ကြောက်တတ်သူများလုံးဝမဖတ်ကြည့် ပါနဲ့ 
နှလုံးရောဂါရှိတဲ့ လူများလုံးဝမဒေါင်းယူပါနဲ့ 
လိုအပ်တဲ့ သူများအောက်မှာlink 3ခုပေးထားပါတယ်
facebook like page(ooarkar)
History Eraser - Cleaner v5.4.1 apk
ဖုန်းကိုင်ထားတဲ့သူများအတွက် Computer တစ်လုံးကဲ့သို့သောClean လုပ်းနိုင် Apk လေးကိုတင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့ Cleaner ထဲ့မှာကျနော်ကတော့ ဒီကောင်ကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ အရမ်းကိုမိုက်တယ်ဗျာ။ ဒီ apk လေး၏ လုပ်ဆောင်းချက် Features တွေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေး၏ ဖိုင်းလေးကတော့3.0MB ဖြစ်ပြီး ဖုန်းအားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 3:58 AM
✔Transformer Myanmar Smart Zawgyi Font ……… .ttf & ifont apk✔
စိတ်ဝင်စားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် Transformer font တဲ့
ဒီဖောင့်ကိုဖောင့်သွင်းရခက်ခဲတဲ့ Lenovo ဖုန်းတွေမှာပါအလုပ်လုပ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
.ttf ကိုတော့ ifont apk နဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Samsung တွေအတွက်ကတော့ ifont apk ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Samsung ဖုန်းတွေမှာတော့ Official မြန်မာစာပါရင်မြန်မာလို Font style မပြောင်းပါဘူးးး
ဒီ Transformers myanmar smart zawgyi font ကိုတော့
MMUG မှကို Line Line က ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သူများအောက်မှာ .ttf နဲ့ ifont apk ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
★Transformer Myanmar Smart Zawgyi Font .ttf ကိုရယူရန်★
★Transformer Myanmar Smart Zawgyi Font ifont apk ကိုရယူရန်★
Special Thanks To Transformer Myanmar Smart Zawgyi Font Owner Ko Line Line
Aung Khaing (MMAS & MMUG)
Posted by lin linn at 4:46 AM
GalaxSim Unlock v2.7.0
Samsung Galaxy sim lock ဖြစ်နေတဲ့ ဖုန်းတွေကို sim unlock လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဖုန်းထဲကနေ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ unlock လုပ်လို့ရမဲ့ GalaxSim Unlock version 2.7.0 အသစ်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
sim unlock လုပ်ချင်သူများ အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
Tested ထားတဲ့ model တွေကို အောက်မှာပဲ ကြည့်လိုက်နော်
- Misc: Galaxy Camera (EK-GC100), Pocket(GT-S5300, GT-S5302), Y /Pro (GT-S5360,GT-S5363, GT-S5367, GT-S5368, GT-S5369, GT-S6102, GT-B5510, GT-B5512), Pop (GT-S5570I), new Ace (GT-S5830, GT-S5839, GT-S6802), Mini (GT-S5570), Gio (GT-S5660), Fit (GT-S5670), Pro (GT-B7510)...
• This app is not affiliated in any way with Samsung.• Trademarks and model names listed above are © copyrighted by their respective owners.
Welcome to www.toetoelkw.blogspot.com
စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူကိုချော့ ဖို့ အတွက် မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ live wall paperအလန်းလေး
ဒီနေ့ ဦးအာကာlive wall paperအလန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ဦးလေး ကတော့ ထက်ရှင်းပြပေးပါမယ်
နောက်ခံအမျိုးအစားမှာ (မိမိပုံထည့် လိုရခြင်း)
ပုံနဲ့ စသားများကို အရောင်းပြောင်းလဲလိုရခြင်း
အနှေး×အမြန် ကိုယ်ကြိုက်သလို ခံစားခွင့် ရှိခြင်း
စုံနေတာပဲဗျာ ကျန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့ မိတ်ဆွေတို့ ဒေါင်းယူပြီးမှ
ကိုယ်တိုင်းစမ်းသပ်လိုက်ပါတော့Download3linkချပေးထားပါတယ်
Xiaomi's (OR) MI Phones များအတွက် Root ပြုလုပ်နည်း + မြန်မာ Font ထည့်သွင်းနည်း
Credit : Tin Htay Ag
မြန်မာစာဖောင့်ကို MI Phones အတော်များများမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်…
ကျွန်တော်စာရေးရတာ အလွန်ပျင်းပါသည်… သုို့သော် လူတိုင်းမေးနေကြတာကလည်း ဒီမေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ဒါလေးရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်…..
မြန်မာစာဖောင့်ထည့်ရန် နှင့် Root လုပ်ရန်အတွက် ဒီနည်းလမ်းတွေကိုတော့ လုပ်တတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်….
မြန်မာဖောင့်သီးသန့်ရချင်ရင်တော့ ဒါလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပီး သူ့အဆင့်အတိုင်း လုပ်လိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါသည်….
မှတ်ချက်။ တချို့ဖုန်းများတွင် လုပ်လို့မရပါ... ဒါကြောင့် အောက်ကရေးထားသော ဒုတိယနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါရန်...
အဲ့ဒါလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ… ပြီးရင် Install လုပ်ပါ...
၂။ အာက်ဘက်ထဲမှာ မြန်မာစာဖောင့် ၆ မျိုး ၇ မျိုးလောက်ပါဝင်ပါတယ် အဆင်ပြေတာကို သွင်းလို့ရပါတယ်…
၅။ Set ဆိုပီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Enter နှိပ်ပါ
၈။ Theme ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်.. Catagory ထဲက Edit Theme > ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပီးလိုက် Font ဆိုတဲ့နေရာပါတဲ့ Page လေး ပေါ်လာပါလာလိမ့်မယ်… Font ကို ရွေးလိုက်ပါ...
၉။ သင့် iFont ကနေ ဒေါင်းလော့လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာစာဖောင့်ကို အဲဒီ့ထဲကနေ ရွေးပီး Apply လုပ်ပေးလိုက်ပါ...
ကီးဘုတ်အတွက်ကတော့ Frozen နဲ့ Bagan ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
For Note: http://www.mediafire.com/download/01396uqsv8s8a6d
For 1s: http://www.mediafire.com/download/slj0d2lx7cr1t18
For mi3w/c: http://www.mediafire.com/download/li0qui0niur1qxo
၁။ သင့်ဖုန်းရဲ့ Updater ကိုသွားပီး Menu Key ကိုနှိပ်ပါ၊ Install Select Package ကို ရွေးပါ...
၂။ သင့်ဖုန်းအတွက် ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ Root zip ဖိုင်ကို ရွေးပီး OK နှိပ်ပါ...
၃။ Reboot ကျပီး ပြန်တက်လာလျှင် သင့်ဖုန်း Rooted ဖြစ်ပါပြီ... သို့သော် Security > Permission > Root Permission > On ပေးရန်တော့ လိုအပ်ပါသည်..
၄။ သင့်ဖုန်းလေး အထက်ပါအဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပီးပါက Root Access လိုအပ်သော Apps များကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ….
၅။ သင်သုံးချင်သော Apps များကို Install လုပ်လိုက်ပါ... ပြီးလျှင် ဖွင့်လိုက်ပါ.... Root Access လိုတယ်လို့ ပြောပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီ့အချိန်ကျလျင် Security > Permission > Root access ဆိုတဲ့နေရာမှာ ခုနက Root access လိုတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ App လေးကို တွေ့ပါလိမ့်မယ် On ပေးလိုက်ပါ... ပြီးလျှင် ထို App ကို ပြန်ဖွင့် အသုံးပြုလို့ရသွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်…. ဒီနေရာကို နည်းနည်းရှည်ရှည် ရှင်းပြရတာက MM font changer တွေ ထည့်ရင် မလွှဲမသွေ ကြုံရမယ့် နေရာဖြစ်နေလို့ပါ…. Font changer သုံးမယ့် သူငယ်ချင်းများ Smart Zawgyi မှ အဆင်ပြေပါမယ်….ကြိုတင်ပြောပြပေးထားတယ်… အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ…
MM Aio: http://www.mediafire.com/download/wq6ujnby3ac7aii
MMAS Zawgyifont Changer: http://www.mediafire.com/download/hnmxxszjmv7sv7d
Myanmar Mi Fans
Posted by lin linn at 4:40 AM
♪ ကမ္ဘာ့ အပါးလွှာဆုံး စမတ်ဖုန်း ဖြစ်လာတဲ့ Oppo R5 ♫
Oppo က သူ၏ ပထမဆုံး 64-bit Smartphone ဖြစ်သော Oppo R5 ကို ပြသလိုက်ပါသည်။ R5 ၏ အထူသည် ၄.၈၅ မီလီမီတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံး စမတ်ဖုန်း ဖြစ်သည်ဟု Oppo က ကြေညာပါသည်။ R5 သည် ယခင်မျိုးဆက် R3 ၏ အထူဖြစ်သော ၆.၃ မီလီမီတာထက် များစွာ လျှော့ချနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ထည်ကို အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ၄ မီလီမီတာ အထူရှိပါသည်။ R5 တွင် ၅.၂ လက်မ AMOLED Full HD 1080p Display တပ်ဆင်ထားပြီး တစ်လက်မလျှင် Pixel သိပ်သည်းဆမှာ ၄၂၃ ဖြစ်ပါ သည်။ မျက်နှာပြင်သည် အလင်းရောင် အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် အလင်းပြန်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် သာမက အရောင်များကိုလည်း အလွန်တိကျစွာ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည်ဟု Oppo ကပြော ပါသည်။
R5 တွင် Android 4.4 ကို အခြေခံ ပြုပြင်ထားသော Color OS 2.0 ပါရှိပါသည်။ Qualcomm ၏ စွမ်းဆောင် ရည်သင့် 1.5GHz Octa-Core Snapdragon 615 Chipset ဖြင့် မောင်းနှင်လည်ပတ်မည် ဖြစ်သည်။ Adreno 405 GPU , 2GB RAM ပါရှိပါသည်။
Oppo က Chipset မှ အပူများ အပြင်သို့ ထွက်သွားစေရန် လေအေးပေးသည့် စနစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် 13MP နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် 5MP Camera များတပ်ဆင် ထားပါသည်။ အနောက်ဘက် ကင်မရာသည် ကိုယ်ထည်၏ အပြင်ဘက်သို့ အနည်းငယ် ထွက်ပေါ်နေပြီး 2160p Video , Full HD နှင့် အနှေးဗီဒီယိုများကို HD အရည်အသွေးနှင့် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
2000mAh Battery ပါရှိပြီး Oppo ၏ လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းပေးနိုင်သော VOOC နည်းပညာပါရှိပါသည်။ 3.5 mm Audio Jack မပါရှိခြင်းမှာ ထူးခြားသော်လည်း ပါးလွှာသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သီချင်းနားထောင်ရန် Wireless O-Music Accessory နှင့် နဂိုပါရှိသော MicroUSB to Audio Jack Adapter ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Oppo R5 ကို ဒေါ်လာ ၄၉၉ ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်သော်လည်း နေ့ရက် အတိအကျကို မသိရသေးပါ။
//ဘယ်ဖုန်းကို ရွေးကြမလဲ ? iPhone6လား ၊ iPhone6Plus လား ၊ HTC One M8 လား ? //
♪ ဘယ်ဖုန်းကို ရွေးကြမလဲ ? iPhone6လား ၊ iPhone6Plus လား ၊ HTC One M8 လား ? ♫
iPhone6နဲ့ iPhone6Plus တွေ ဈေးကွက် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဖုန်းနှစ်လုံး ထဲက ဘယ်ဟာကို ရွေးသင့် သလဲ။ ဘယ်ဖုန်းက ပိုကောင်းသလဲ၊ iPhone ကို မရွေးဘဲ HTC One M8 ကို ရွေးရင်ကော ဘာတွေ ကွာခြားမလဲ ဆိုတာလည်း သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီတခါတော့ အက်ပဲလ်က Android စမတ်ဖုန်းတွေ လိုပဲ စကရင် အရွယ်အစား ကြီးကြီးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး iPhone6Plus က ၅.၅ လက်မ ရှိပါတယ်။ HTC One M8 ကို ရွေးတာက iPhone6နဲ့6Plus ထက် နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ပိုမြင့်ပြီး ဈေးနှုန်း ကလည်း ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက် သက်သာ နေလို့ အဲဒီဖုန်းကို ရွေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစခြင်း display အရွယ်အစားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမယ်။ iPhone 5s နဲ့ မော်ဒယ်အသစ် iPhone6တွေဟာ display အရွယ်အစား ၄.၇ လက်မရှိပြီး resolution အနေနဲ့ 1334 x 750 ပဲ ရှိပြီး၊ iPhone 5s နဲ့ အတူတူ ပါပဲ။ 326 ppi (Pixel per inch) ပဲ ရှိပါတယ်။ iPhone6Plus ကတော့ စကရင်အရွယ်အစား ၅.၅ လက်မ၊ resolution 1920 x 1080 ဒါမှ မဟုတ် 401 ppi ရှိပါတယ်။
HTC One M8 က စကရင်အရွယ်အစား5လက်မ၊ resolution 1980 x 1080 ဒါမှမဟုတ် 441 ppi ရှိပါတယ်။ iPhone6နဲ့ iPhone6Plus နှစ်မျိုးစလုံးဟာ Retina Display ကို Retina HD Display နဲ့ အစားထိုးထားပါတယ်။ Retina HD ဟာ ပြတ်သားမှု၊ အရောင်ဖော်ပြရာမှာ တိကျမှုတွေ ပိုကောင်းပါတယ်။
iPhone ရဲ့ Display တွေဟာ ထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ Display တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် HTC One M8 ရဲ့ Display က ပိုကောင်း နေပါတယ်။ Display တွေရဲ့ နည်း ပညာကို ကြည့်ရင် iPhone6နဲ့ iPhone6Plus က IPS panel တွေ သုံးထားပြီး One M8 ကတော့ Super LCD (SLCD) တွေ သုံးထား ပါတယ်။
အဲဒီနည်းပညာ နှစ်ခု စလုံးဟာ မြင်ကွင်းထောင့် အကျယ် (Viewing Angles)၊ ပြတ်သားမှု (Contrast) အ ရောင်တိကျမှု စံနှုန်း (Colour Gamut) တွေ ကောင်းပါတယ်။ iPhone6ဟာ ရီဆိုလူးရှင်း 1334 x 750 ပဲ ရှိတာက တော့ စိတ်ပျက်စရာပါ။ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက် တွေကို မကြည့်ဘဲ မျက်မြင် အခြေအနေ အတိုင်း လက်တွေ့ရွေးချယ်မယ် ဆိုရင် အဲဒီ ဖုန်း ၃ ခုစလုံး ကောင်း မွန်ပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးတာ ရွေးရင်တော့ iPhone6Plus ကိုပဲ ရွေးရပါမယ်။
အရွယ်အစား အလျား၊ အနံ၊ အထူနဲ့ အလေးချိန်တွေက iPhone6 က 138.1 mm x 67 mm x 6.9 mm ထူ ပြီး ၁၂၉ ဂရမ်လေးပါတယ်။ iPhone6Plus က 158.1 mm x 77.8 mm x 7.1 mm ထူပါတယ်။ ၁၇၂ ဂရမ် လေးပါတယ်။ HTC One M8 ကတော့ 146 mm x 70.6 mm x 9.4 mm ထူပါမယ်။ ၁၆၀ ဂရမ် လေး ပါတယ်။
အဲဒီ အတိုင်းအတာ တွေအရ ကြည့်ရင် အရွယ်အစား သေးတဲ့ ဖုန်းတွေက အလေးချိန်ပေါ့ပြီး၊ သူ့အချိုး အ တိုင်းရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် HTC One က အားလုံးထဲမှာ အထူဆုံး ဖြစ်နေ ပါတယ်။ တခြားဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ ဆမ်ဆောင်းဂလက်ဆီ S5 ဟာ ၁၄၅ ဂရမ် လေးပြီး၊ 8.1 mm ပဲထူလို့ HTC One M8 ထက် နည်းနည်းလေး ပိုပါး ပါတယ်။ Note4နဲ့ကတော့ iPhone6Plus နဲ့ ဆင်တူပြီး၊ အရွယ်အစား ၅.၇ လက်မမှာ resolution က 2560 x 1440 ရှိပါတယ်။
Android ဖုန်းတွေနဲ့ အက်ပဲလ်ဖုန်းတွေရဲ့ အတွင်းဘက်က ဟာ့ဒ်ဝဲတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရတာ အမြဲ ရှုပ်ထွေး လေ့ရှိ ပါတယ်။ အက်ပဲလ်ဟာ အမြဲပဲ Clock Speed နှိမ့်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ပါဝါစားနှုန်း နိမ့်အောင်လို့ ပါ။ အလားတူပဲ RAM တွေရဲ့ ပမာဏကိုလည်း ဝိတ်လျော့ထားပါတယ်။ ဒါလည်း ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ပါဝါစားနှုန်းကို လျှော့ချဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ ဒါဟာ iPhone6နဲ့ iPhone6Plus တွေ ဟာ သုံးရတာ နှေးနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ။ သူ့ဟာနဲ့ သူကတော့ အဆင်ပြေနေ ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး CPU ကိုကြည့်ရင် iPhone6နဲ့ iPhone6Plus ဟာ apple A8 SOC (20 nm) ချစ်ပ်တွေ သုံးထား ပါတယ်။ အဲဒီ CPU တွေဟာ A7 dual core CPU တွေကို upgrade လုပ်ထားတာနဲ့ ဆင်တူပေမယ့် CPU ကိုတော့ ပိုမြှင့်ထား ပါတယ်။ RAM က 1GB လို့ ပြောပေမယ့် အက်ပဲလ်ရဲ့ ဆိုက်ထဲမှာ တရားဝင် အတည်ပြု ရေးမထားပါဘူး။ iPhone6နဲ့ iPhone6Plus မှာ M8 (Motion Coprocessor) ပါပါတယ်။ ဒါဟာ ဆင်ဆာတွေရဲ့ ပါဝါစားနှုန်းကို လျှော့ချဖို့ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင် ထားပါ တယ်။
HTC One M8 ကတော့ Snap-dragon 801 SOC ကိုသုံးထားပြီး Quad-core Krait CPU ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂရပ်ဖစ်အတွက် သုံးထားတဲ့ Adreno 330 ဟာ နည်းနည်းနောက်ကျပြီး Samaung Galaxy Note 4, Note Edge, LG G3 နဲ့ ကိုရီးယားမှာပဲ ဖြန့်ချိတဲ့ Galaxy S5-LTEA ဖုန်းတွေဟာ Snapdragon 805 CPU, Adreno 420 GPU တွေသုံးထားလို့ အက်ပဲလ်ရဲ့ A8 SOC တွေထက် နည်းနည်းပိုသာပါတယ်။ HTC One M8 ကတော့ RAM 2GB သုံးထား ပါတယ်။
iPhone6 နဲ့ iPhone6 plus တွေဟာ 16 GB, 64 GB, 128 GB ပါပြီး HTC One က 16 GB, 64 GB ပဲ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ Micro SD card ပါ လို့ လိုအပ်ရင် Micro SD card သုံးနိုင်ပါ တယ်။
HTC One ရော iPhone6, iPho-ne6Plus ပါ ဘက်ထရီတွေ ချို့ယွင်းရင် အစားထိုးတပ်ဆင် သုံးနိုင်အောင် လုပ်ပေး ထားပါတယ်။ iPhone6နဲ့ iPhone6Plus က mAh ဘယ်လောက် သုံးထားသလဲ ဆိုတာ မပြောပေမယ့် iPhone 5s ထက် သိသိသာသာ ပိုကြီးမယ် လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒါဟာ iPhone6နဲ့6Plus ရဲ့အရွယ်အစား ကြီးလာတာ ကြောင့် ဖြစ်ပြီး iPhone6က Wifi သုံးပြီး Web bro-wsing လုပ်တာကို ၁၁ နာရီ၊ LTE သုံးရင် ၁၀ နာရီ၊ ဗီဒီယိုတွေ ဖွင့်ကြည့် ခဲ့ရင် ၁၁ နာရီလောက် ခံမယ်လို့ apple က ပြောပါ တယ်။ iPhone6Plus ကတော့ Wifi နဲ့ LTE သုံးရင် ၁၂ နာရီနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ဖွင့် ကြည့်ရင် ၁၄ နာရီ လောက် အသုံးခံမယ် လို့ ပြောပါတယ်။
HTC One M8 ကတော့ တခြား android phone အကြီးတွေထက် အရွယ်အစား ပိုသေးတာ ဖြစ်လို့ 2600 mAh ဘက်ထရီပဲ သုံးထားပြီး apple iPhone တွေထက် ဘက်ထရီသက်တမ်း ပိုနည်းပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာတော့ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ ရလဒ်တွေက ပိုမှန်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုဆောင်းပါး ရေးတဲ့ အချိန်ထိ အဲဒီလို စမ်းသပ်ခွင့် မကြုံသေးပါဘူး။
iPhone6နဲ့ iPhone6plus ရဲ့ GSM Version နဲ့ HTC One M8 တို့ဟာ ကမ္ဘာ့ဆဲလ်လူလာနဲ့ ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်မှုစံ တော်တော်များများကို ထောက်ပံ့လုပ် ဆောင်ပေးနိုင် ပါတယ်။ အဲဒီဖုန်း ၃ ခု စလုံးဟာ 802.11 ac, Bluetooth 4.0 နဲ့ NFC (Near Field Communication) တွေ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ Apple Pay Platform ဟာ NFC ကို သုံးထားပြီး iPhone6နဲ့ iPhone6Plus အတွက် ပိုအဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီဖုန်း ၃ ခုစလုံးဟာ Quadcomm MOM 9625 မိုဒမ်ကိုပဲ သုံးထားတဲ့ အတွက်3G နဲ့4G band တွေနဲ့ LTE Cat4(150 Mbps down, 500 Mbps up) အထိ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ iPhone6နဲ့ iPhone6Plus VoLTE ကိုပါ ထောက်ပံ့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ် လို့ ယူဆရပြီး HTC One M8 ကတော့ ထောက်ပံ့ မပေးနိုင်ပါဘူး။
iPhone တွေရဲ့ အားသာ ချက် တခုက ကင်မရာ ဖြစ်ပြီး အခု iPhone6နဲ့ iPhone6plus တွေမှာလည်း HTC One M8 ထက် သာပါတယ်။ HTC One ထက်သာမက တခြား android phone တွေ အများ စုထက်ပါ သာကောင်းသာနိုင် ပါတယ်။ အက်ပဲလ်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သူ့ရဲ့ iPhone6နဲ့ iPhone6plus တွေ မှာ iSight ဆင်ဆာအသစ် တခု တိုးထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။ 8 Megapixel ရှိတဲ့ အဲဒီ ကင်မရာမှာ အက်ပဲလ် ကနေ နာမည်ပေးထားတဲ့ focus pixel တွေက နေ phase detection autofocus လုပ် ပေးပါ မယ်။ optical image stabilizer လုပ်ဆောင်ချက်ပါပြီး အဲဒီ လုပ်ဆောင် ချက်ကနေ ပြတ်သားမှု အပိုင်းကို ထပ်ဆောင်း လုပ်ဆောင်ပေး မယ့် အပြင် အလင်းအားနည်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ပုံရိပ် အရည်အသွေး ပိုကောင်း စေပါ လိမ့်မယ်။
HTC One M8 ကင်မရာ Pixel က 2.0 M ရှိပြီး iPhone က 1.5 M ရှိလို့ နည်းနည်းပိုကြီးပါတယ်။ One M8 ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ လုပ်ဆောင်ချက် တချို့က iPhone မှာမပါဘဲ 3D ရုပ်ပုံ တွေအတွက် depth sensor ပါတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ color reproduction လုပ်ဆောင်ချက်က သိပ်မကောင်းလှဘဲ ပြောက်ကျားဖြစ် တလည်း မြင့်နေပါတယ်။ Galaxy S5 မှာ Phase dection autofocus ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ထွက် အရည်အသွေးက အပြစ်မကင်းဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
iPhone6နဲ့ iPhone6plus မှာ ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ် ပါလာပြီး HTC One M8 က လိုက်မမီတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနှေးရိုက်ကူးတဲ့ 240 fps (တစက္ကန့်မှာ ၂၄၀ ဖရိမ်)၊ autofocus လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ face detection လုပ်ဆောင်ချက်ကို အဆက် မပြတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဖက်က face time ကင်မရာကလည်း HTC One ထက်ရော၊ တခြား android စမတ်ဖုန်း တွေထက်ရောသာ ပါတယ်။ iPhone6Plus ဟာ iPad Mini နဲ့ဆင်တူပြီး iPad အစားထိုးမယ့် စမတ်ဖုန်းဖြစ်လာပါတယ်။
အရွယ်အစားကြီးတာ၊ apple pay ၊ အရည်အသွေးမြင့် ကင်မရာလုပ် ဆောင်ချက်တွေနဲ့ Apple Watch ကို သုံးဖို့ လိုခဲ့ရင်တော့ iPhone6နဲ့ iPhone6plus ကိုပဲ ရွေးရပါမယ်။ ကျန်တဲ့အချက်တွေ ကတော့ အဲဒီဖုန်း ၃ခု စလုံးသိပ် ကွာ ခြားမှု မရှိပါဘူး။
တခြား စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ phablet တွေထက်စာရင် iPhone ရဲ့အရွယ် အစားနဲ့ အထူကြောင့် ကိုင်ရ တာ သေးကွေး ပေါ့ပါးတယ်လို့ ခံစားရ စေပါတယ်။ ဖုန်း ၃ လုံးစလုံးကို လက်တွေ့ကိုင်တွယ် ချိန်ဆကြည့် ရာမှာလည်း HTC One M8 ဟာ အိမ်ခွံကို သတ္တုနဲ့ လုပ်ထားလို့ ကိုင်ရတာ အဆင်ပြေတာ တွေ့ရပေမယ့် iPhone တွေထက် သိသိသာသာ ထူနေပါတယ်။
iOS 8 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေအမြောက်အများရှိနေပြီး အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ကာယ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ Apple Pay ကလည်း မိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံ အိတ် လို သုံးနိုင် ပါမယ်။ android ဖုန်းတွေအတွက် လည်း ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
ကန်ထရိုက် စာချုပ်နဲ့ တွဲရောင်း တဲ့ HTC One M8 နဲ့ iPhone6က ဒေါ် လာ ၂၀၀၊ iPhone6Plus က ဒေါ်လာ ၃၀၀ ပေးရပါမယ်။ အလွတ်ဝယ်မယ် ဆိုရင်တော့ iPhone6က ဒေါ်လာ ၄၀၀ လောက်၊ iPhone6Plus က 128 GB မော်ဒယ် ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောက် ပေးရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာတော့ အဲဒီဈေးနှုန်း တွေထက် ပိုမြင့်ပါ လိမ့်မယ်။
ဈေးနှုန်း အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ iPhone6ထက်စာရင် HTC One M8 က သက်သာနေ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iPhone ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ သုံး ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ အရင်က iPhone သုံးခဲ့ တဲ့သူတွေ အများစု ကတော့ iPhone6 ကိုပဲ ရွေး ကြပါလိမ့်မယ်။
အရွယ်အစားကြီး မားတဲ့ iPhone6Plus ကို ယှဉ်ဖို့က Galaxy Note4ရှိနေပြီး သူ့ရဲစတိုင်လပ်စ် (Stylus) နဲ့ တခြားလုပ်ဆောင်ချက် တွေက ရွေးစရာ အချက်တွေ ဖြစ်စေ ပါတယ်။ iPad Mini လို သုံးနိုင်တဲ့ အချက်တွေက iPhone6plus ကို ရွေးရတဲ့ အ ကြောင်းတွေ ဖြစ်လာပါ လိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့ အချက်တွေ ကတော့ ဘယ်ဖုန်းကို ရွေးပါလို့ ပြောရခက်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက် အခြေအနေပေါ်မှာလည်း မူတည်နေ ပါမယ်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ လည်း ရေးသားထားပြီးဖြစ်လို့ လက်တွေ့ကိုင်တွယ် စမ်းသပ်ပြီး သင်ကြိုက်တဲ့ဖုန်းကို ရွေးချယ်ပါလို့ ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။ ။
iOS 8-8.0.1 ကို Jailbreak လုပ်နည်း + Cydia ကို One Click သွင်းနည်း
iOS 8 မှ iOS 8.1 အထိ Jailbreak လုပ်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ iOS 8 မှ iOS 8.1 အထိ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Device တွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းပါ။
Jailbreak လုပ်လို့ရနိုင်မယ့် Firmware Version တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။
iOS 8 ကို Jailbreak လုပ်လို့ရပေမယ့် Jailbreak လုပ်ပြီးကာစမှာအရင်တုန်းကလိုတော့ Cydia က Built in မပါသေးပါဘူး ။ ကိုယ့်ဘာသာ Cydia ကို Manually ထပ်သွင်းရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု Jailbreak လုပ်တဲ့ Tool ရော Jailbreak လုပ်ပြီးရင် Cydia ကို One Click နဲ့သွင်းနိုင်မယ့် ခလုတ်ပါ ပါဝင်တဲ့ Installer ကို ရုရှားဖိုရမ်တစ်ခုကနေတွေ့လို့ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Installer လေးမှာ PanGu iOS 8 v1.0.1 ရော ၊ Jailbreak လုပ်ပြီးရင် Cydia ကိုဆက်လက်သွင်းနိုင်မယ့် ခလုတ်ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
ကဲ iOS 8-8.0.1 ကို Jailbreak လုပ်နည်း ၊ Cydia ကို One Click သွင်းနည်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
Jailbreak ရော Cydia One Click Installer ရောပါလို့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုပါပဲ။ အောက်က Link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Jailbreak လုပ်ရန် အပေါ်မှာ Download ရယူခဲ့တဲ့ Installer ကိုဖွင့်ပါ။
Jailbreak မလုပ်ခင် ဖုန်းမှာ Passcode ကို off ထားဖို့လိုပါမယ်။ Setting > iCoud ထဲက Find My iPhone ကို off ထားဖို့လိုပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုချိတ်ပြီး အခုပေးထားတဲ့ Installer ထဲက ပထမခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Pangu iOS 8 Jailbreak Tool ကိုဖွင့်ပါ။
ပြီးရင် အပြာရောင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး Jailbreak လုပ်ပါ။
ဖုန်းကို Jailbreak လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Pangu App လေးရောက်နေပါလိမ့်မယ်။
ယင်း Pangu App ထဲကိုဝင်ပါ။ OpenSSH ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
OpenSSH ကိုသွင်း ပြီးရင် ခုနက Installer ထဲက ဒုတိယခလုတ် “Run Install Cydia” ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အောက်ပုံထဲကအတိုင်း သူ့ဘာသာသူအလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် မိမိတို့ရဲ့ iPhone/Pad/Pod touch ကို reboot ချပြီးပြန်တက်လာရင် Cydia ကိုသွင်းပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင့်ရဲ့ iOS 8 တင်ထားတဲ့ iDevice ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ Jailbreak လုပ်ပြီးပါပြီ။
ဖုန်းထဲမှာ မသုံးစေချင်တဲ့ Application တွေကို ပိတ်ထားပေးမယ့်-Smart Applock v3.4.4 Apk
ဖုန်းကိုင်ထားသောဘော်ဒါတို့အတွက် ဖုန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှ မကြည့်အောင် Pin Code , Password , Pattern lock အစရှိသဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် Lock ချပေးနိုင်တယ် Application လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိဖုန်းထဲက Game , Application , Gallery , Message , Call log , တွေကို မကြည့်စေ မမြင်စေချင်ရင် Smart App Lock နဲ့Application Lock တွေအများကြီးရှိပါတယ် အဲဒီအထဲကမှ ကျွန်တော် သဘောအကျ ဆုံးက Smart AppLock ပါ။ Lock ချဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးနဲ့ Feature တွေစုံလင်လို့ပါ။File Size ကလည်း 1.6MB လေးရှိပြီး Android OS 2.1အထက်ရှိ ဖုန်းတွေသုံးရန် ဒေါင်းယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
♪ Play Storeမှာပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ရမဲ့ Apk တွေကို Free ဒေါင်းလို့ရနိုင်မယ့် Free Store v1.6 APK ♫
''Play Store''မှပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ရမဲ့ဆော့ဝဲများကို ဒေါင်းယူနိုင်မဲ့ ''Free Store Apk''လေးနှင့် Freeဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ လွယ်ကူစွာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Application များနဲ့''Game''များကိုပါ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပဲဒေါင်းယူ လိုက်ကြရအောင်။ Android OS တိုင်းမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
♪ ဖုန်းရဲ့ Original အသံပိုကျယ်လာစေမယ့် - Volume Ace v3.3.5 Apk ♫
ဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ အသံပိုင်းကိုလိုသလိုချိန်ညှိ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Volume Ace v3.3.5 ဆိုတဲ့ Application တစ် ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်းမှာပါပြီးသား Audio System ထက်ကိုပိုပြီးတော့ အသေးစိတ် ပြင်ဆင် နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Original အသံတိုးနေတဲ့ ဖုန်းများမှာလည်း Volume Ace ကို Install လုပ်ပြီး အသံပိုင်းဆိုင်ရာကို ပိုပြီးကျယ်လာစေရန်အတွက် ပြုပြင်င်္နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ File Size အနေနဲ့ 906.6KB လေးသာရှိတာမို့ ဒေါင်းယူ ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ နမူနာပြင်ဆင်ပုံတွေကို အောက်မှာ Screen Shot ရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
T-Mobile Galaxy S4 SGH-M919 v- 4.4.2 ကိုလွယ်ကူစွာအမြစ်တူးမယ်(Root)
ဦးအာကာဒီနေ့ တော့ T-Mobile Galaxy S4လေးကိုRootလုပ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မခတ်ခဲပါဘူး နည်းလမ်းကတော့ သိပြီးသားပါပဲ ထစ်နေတယ်နော် Samsung ဖုန်းတွေကအမြစ်တူးတာအလွယ်ဆုံးပဲ ကဲအောက်မှာလိုအပ်တာလေးတွေအရင်ယူပါ
ဖုန်း 60% battery levelရှိရပါမယ်
computerမှာkies 3နဲ့ Driversကို အရင် installလုပ်လိုက်ပါ သွင်းထားတာရှိရင် မသွင်းနဲ့ တော့ 
ပြီးရင် Settings ထဲကိုသွားပါDeveloper optionsကိုဝင်ပါUSB debugging checkမှာအမှန်ခြစ်လိုက်ပါ။
ပါဝါပိတ်ပါ ပီးရင်(Volume Down + Home + Power buttons) ဖိနှိပ်ထားပါ
10 secondsလောက် ဒါဆို အောက်ကပုံလို ပေါ်ပါလိမ့် မယ်
Download Mode၀င်အောင် Volume up key(အသံချဲတဲ့ ခလုတ်)ကိုနှိပ်ပါ
Odin3 v3.07Runလိုက်ပါ မိမိဖုန်းကို computerနဲ့ ချိတ်စပ်လိုက်ပါ(Usb cable)
massage box displayပေါ်သို့ ( ID:COM )အရောင်သမ်းသွားတာကိုတွေ့ ပါလိမ့် မယ်
APကိုနှိပ်ပါ ဒါဆို computerထဲမှာမိတ်ဆွေဘယ်နေရာမှာထားတာလဲ
ဒေါင်းထားတဲ့ CF Root ဖိုင်းထဲက tar.md5ကိုရှာပြီးထည့် ပေးလိုက်ပါ
a few seconds ပါဝါကျသွားပါမယ်
ပြန်တတ်လာရင် su apkလေးမိတ်ဆွေဖုန်းထဲရောက်နေပြီးဆိုရင်တော့ okသွားပါပြီး
ဦးတင်ပေးသောpostကိုပြန်လှန်shareပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ MY PAGE
ဖုန်းမှ Apps တွေကိုဖုန်းမှာသိမ်းထားကျမယ်(မြန်မာမူ)
ဆော့ဝဲလေးကတော့ ဖုန်းထည်းက Apps တွကိုဖုန်းထည်းမှာ
ကျနော်လည်း အဆင်ပြေတာနဲ့ မြန်မာမူလေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်..
★★★★ ရွှေမိုးညို ★★★★
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ‬ ပြုံးပဒေသာ မေးခွန်းများ
ရယ်မောခြင်းသည် ဘ၀အမော ပြေစေ၏လို့ ကာတွန်းဆရာ တစ်ယောက် ပြောသလို (နာမည်မမှတ်မိ တော့လို့ သိရင် ပြောပြပေးပါ) တနေ့တနေ့ ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရင်း မောနေမယ့် လည်လည်လာသူ တွေကို ပြုံးစေ ရယ်စေရင်း တခုခု ရသွားစေ ချင်လို့ပါ။ မရယ်ရခဲ့ရင်တောင် တခုခုရသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး။ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး တင့်ကားကို တီထွင်တာ ဘယ်နိုင်ငံလဲ၊ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်အချိန်က ထွင်ခဲ့တာလဲ၊ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ။
ဖြေ။ မြန်မာပြည်မှာ တပင်ရွှေထီး က တောင်ငူခေတ်ဦး အေဒီ ၁၇ရာစု ၀န်းကျင်မှာ ထွင်ခဲ့တာပါ။ ဆင်ပေါ် အမြောက်တင်ပြီး ပစ်တယ်ခင်ဗျ.. သည်တင့်ကားက တောင်ပေါ်လဲ တက်နိုင်၊ တောလဲ တိုးနိုင်ပြီး မောင်းဖို့ ဓာတ်ဆီလည်း ထည့်စရာ မလိုဘူး။ ဆင်က သွားရင်း လာရင်း သူ့အစာသူ ရှာစားတယ်။
မေး။ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ၀ိုင်ယာလက်စ် တကနိုလိုဂျီ ကို ဘယ်နိုင်ငံက စသုံးခဲ့လဲ။ ဘယ်တုန်းက စလဲ။ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ
ဖြေ။ မြန်မာနိုင်ငံပါပဲ။ ပျူခေတ် ကတည်းကပါ။ ရန်သူလာရင် စည်တီးပြီး အချက် ပေးရင်း ဆည်ချိုး ချတဲ့ နေရာမှာ သုံးခဲ့ ပါတယ်။
မေး။ တယ်စွမ်းတဲ့ မြန်မာတွေပဲ။ ကဲ သည်မြန်မာတွေ ခုဘာလုပ်လို့ ဘာဖြစ်နေလဲ
ဖြေ။ ဆရာရော ခုဘာလုပ်နေလဲ
မေး။ မေးတာ မဖြေဘဲ မင်းဘာစကား ပြောတာလဲ။ မင်း စော်ကား ချင်တာလား။ မင်း မိုက်ရိုင်းလှချည်လား
မှတ်ချက်။ သူများဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာကိုပဲ လိုက်ကြည့်ရုံ ကြည့်နေပြီး လျှောက်ပြော ရုံ ပြောနေ တတ်သူဟာ လေ့လာမှုမပါခဲ့ရင် ကိုယ်တိုင် မှာလဲ ကိုယ်လုပ်စရာတွေကို ဖိဖိစီးစီး လုပ်ဖို့ အချိန်တွေ ဖြုန်းတီး ပစ်ရာ ရောက်နေပြီး ကိုယ့် ဗဟုသုတက ခေတ်နဲ့ ညီနေ ပေမယ့် ကိုယ့် စွမ်းဆောင်ချက်က ခေတ်နောက် ကျန်နေခဲ့ တတ်ပါတယ်။ သည်လိုပဲ မေးတာကို မေးသူ အကြိုက်လိုက် ဖြေရုံသာ ဖြေတဲ့ အဖြေကိုသာ မျှော်လင့်နေတတ်တဲ့ ဆရာ ဆိုသူများနဲ့ ပတ်သက် မိနေသမျှ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု အရည် အသွေးက တလွဲ ထက်မြက်ပြီး လူ့လောကအတွက် အသုံးမကျတဲ့ အားထုတ်မှုတွေပဲ ထွက်ပေါ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit-Mc wai y
♪ Telenor အသုံးပြုသူများအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထာသင့်တဲ့ Application များ ♫
App For Telenor SIM Card User ( Android & IOS)
Telenor ဖုန်းကဒ် အသုံးပြုသူတိုင်း မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားရမယ့် Apk လေးတွေ စုစည်းပေးလိုက်ပါ တယ်။အောက်မှာ Download linkလေးတွေနဲ့ တွဲပေးထားပါတယ်.။
1. Zero Facebook.apk
ဒီApp လေးကတော့ Telenor က Facebook ကို Free သုံးဖို့ တရားဝင် ခွင့်ပြုပေးထားတာပါ။
Download link >> Zero Facebook
2. Opera Mini.apk
ဒီ App လေးကလည်း Telenor နဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းထားတဲ့ Browser App လေးပါ။ java script, flash တွေမပါဝင်တဲ့ အတွက် Data အသုံးပြုမှုကို နည်းပါးစေပြီး ငွေကုန် သက်သာစေပါတယ်။
3 .အင်တာနက်မြန်နှုန်းပြ ပရို.apk
မြန်မာ / အင်္ဂလိပ် ဗားရှင်း2ခု လုံးပါဝင်ပါတယ်။ Download / Upload Speed တွေကို နိုတီဘား မှာ ပြသပေးမယ့်အပြင် တစ်နေ့ချင်း Data သုံးစွဲမှု / လစဉ် သုံး စွဲမှု မှတ်တမ်းတွေကိုပါ ပြသပေးပါတယ်။
English version Download link >>Internet Speed
Myanmar Version Download link >>Internet Speed
ဖုန်းRAM လေးနေတာတွေရှင်းလေးပေးပြီး ဖုန်းကိုပေါ့ပါး...
သရဲစာအုပ်ပေါင်း၄၀ကျော်ကိုapkတခုထဲနဲ့ ကြည့်နိုင်တဲ ...
✔Transformer Myanmar Smart Zawgyi Font ……… .ttf & ...
စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူကိုချော့ ဖို့ အတွက် မြန်မာဘာသ...
Xiaomi's (OR) MI Phones များအတွက် Root ပြုလုပ်နည်း...
//ဘယ်ဖုန်းကို ရွေးကြမလဲ ? iPhone6လား ၊ iPhone6...
iOS 8-8.0.1 ကို Jailbreak လုပ်နည်း + Cydia ကို One...
ဖုန်းထဲမှာ မသုံးစေချင်တဲ့ Application တွေကို ပိတ်ထ...
♪ Play Storeမှာပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ရမဲ့ Apk တွေကို Free ...
T-Mobile Galaxy S4 SGH-M919 v- 4.4.2 ကိုလွယ်ကူစွာအ...
ဖုန်းမှ Apps တွေကိုဖုန်းမှာသိမ်းထားကျမယ်(မြန်မာမူ)...
♪ Telenor အသုံးပြုသူများအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထာသင့်...
Android Phone တွေရဲ့ Cannot connect to camera ဆိုတ...
Root Cleaner v3.4.0 For android
♪ Computer မလိုဘဲ Click တစ်ချက်နဲ့ Root ဖောက်ပေးနိ...
How to Jailbreak and install Cydia on iOS 8 (2)
✔KingSoft Office Apk v6.0.3 Apk✔
TELENOR INTERNET SETTÌNG ချိန်​ရန်​အတွက်​ပါ
သူများမမြင်စခြေင်တဲ့ဖိုင်တွေဖွက်ထားပေးမဲ့ File Hid...
♪ Coolpad ဖုန်းအားလုံးနီးပါးကို ROOT လုပ်ပေးနိုင်တ...
Android 5.0 Lollipop ကို နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင် ဖြန့်...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ထိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကု...
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Line သုံးစွဲသူ သန်း ၃၀ ခန့်ရှိလာ...
♪ Ooredoo ရဲ့မိနစ် ၁၀၀၀ Pormotion စတင်နေပါပြီ ♫
အလန်းစား အမိုက်စား Effect တွေနဲ့ ရိုက်နိုင်တဲ့-Cam...
♪ ဓါတ်ပုံ ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို Scanner မလိုဘဲ Pho...
kaymu မြန်မာအွန်လိုင်းဈေးဝယ် (online Shopping in ...
♪ Google က USB Stick ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းအကောင...
♪ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်ပြီး FB Account အသစ်ဖွင့်ဖို့သင့်ေ...
Lucky Patcher v5.0.1
♪ Android 5.0 ကို Lollipop အဖြစ် ကြေညာပြီး Nexus ထ...
ဖုန်းအားအမြန်ဝင်စေမဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေး MX Battery Sa...
iPad/iPod touch / Mac Device တွေကနေ ဖုန်းခေါ်ဆုိုလ...
ပုံတွေရုပ်ထွက်ကောင်းအောင်ရိုက်ပေးမဲ့ HD Camera Pro...
♪ Samsung Galaxy S5 VS HTC One (M8) တို့၏အားသာချက်...
ICပရိတ်သတ်များအတွက်နာမည်ကျော်ခဲ့ တဲ့ သီချင်းများRi...
မလေးရှားနိုင်ငံ Kuala Lumpur (KL) တွင် တာဝန်ထမ်းဆေ...
Android ဖုန်းနဲ့ Karaoke ဆိုနိုင်မယ့် Mini Karaoke...
♪ Shake လုပ်ရုံနဲ့ Screen Shot ရိုက်ယူပေးမယ့် - S...
iOS 8 အတွက် တကောင်း အမည်ဖြင့် iOS မြန်မာ ကီးဘုတ် ထ...
♪ Business Card တွေကိုသီးသန့်သိမ်းဆည်းပေးမယ့် - Ca...
တချက်နှိပ်ရုံ နဲ့ screenshot ရိုက်ပေးမဲ့ Screensho...
သူများတင်လိုက်တဲ့ viber profile photo ကိုရယူမယ်
♪ မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်မျ...
♪ Android ဖုန်း User များသတိပြုသင့်သော အချက် ( ၉ )...
ttKeyboard V1.2 ကို AppStore မှာ ရယူနိုင်ပါပြီ
တယ်လီနော ရန်ကုန်တွင် ဆင်းကတ် (၁)သန်းဖြန့်မည်
♪ ရေစိုသွားသော ဖုန်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်နည်း (၅) ချက...
Hotspot Shield ELITE v2.2.8 APK
ဘတ်ထရီ နည်းပညာသစ်ကြောင့် အားသွင်းချိန် ၂ မီနစ်အတွင...
Facebook Accounts မဖွင့်တက်သူများအတွက်
Android အတွက် Backup Applications - 2014 များ စုစည...
ဓာတ်ပုံတွေကို editing လုပ်ရမှာ ကောင်းဆုံး- Handy P...
✔Apk Creator v1.1.0 apk✔ပုံ​တွေကိုapkလုပ်​မယ်​
App For Telenor SIM Card User
chat ချင်သူများအတွက် အသုံးဝင်ပါမယ်
♪ တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ်များ ရန်ကုန်၌ ရောင်းချရန် ၂ ပတ်...
ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း_ Apk v.1.0
ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Camera apkအသုံးပြုချင်းသူများအတွ...
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် ...
အခြေခံအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ (၁)-(၂) ဆရာဦးသိန်းလွင်
✔Android နှင့်ပက်သက်၍ အနည်းဆုံး သိသင့်သမျှ✔
အများပြောနေကြတဲ့ G, H+, E, 3G နဲ့ LTE ဆိုတာဘာလဲ?
IDကဒ်အတုအဖြစ်သုံးချင်းတယ်ဘော်ဒါတွေအတွက်-Fake ID Ge...
♪ Music , Melody များကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ...